Wasiirka Caafimaadka Puntland oo daahfuray Shir looga hadlayo qorsha 3-sadex sano duumada-Sawirro | Puntland Today
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo daahfuray Shir looga hadlayo qorsha 3-sadex sano duumada-Sawirro
Wasaaradda Cafimaadka Puntland waxaay maanta Marti galisay shir ay ka Soo qaybgaleen maamulada Dalka iyo dowladda federaalka, waxaa looga hadlaya qorshaha sadaxda sano ee soo socota wacyigalinta Duumada.
Shirka oo maanta ka furmay Wasaaradda Caafimaadka Puntland Garowe waxaa furay Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr Cabdinaasir Cismaan Ciise ( CUUke) sidoo kale waxaa joogay agaasimaha guud Wasaaradda.
Waxaa Shirka loogu dajin doona mudadda uu soccdo qorshaha 3-sano ee soo socota lagu shaqaynayo xanuunka Duumada 2017 ilaa 2020, Waa Shirkii ugu ballaarna oo noociisa ah oo wasaaradda Caafimaadka Puntland martigaliso.
Waxaa ka qayb galay maamulada Jubbaland, Koonfur galbeed, Hirshabeelle , Puntland oo marti galisay iyo Ha’yadaha kala shaqeeya caafimaadka.
Dr Cabdinaasir Cismaan Ciise ( Cuuke) ayaa sheegay in muhiimadu tahay in dhamaan ummadda Soomaaliyeed adeegyada caafimaadka ee Maalaryada si hufan loo gaarsiiyo, isagoo ka dhawaajiyey in fariimaha caafimaadka dadka loogu gudbiyo afka Soomaaliga si ay uwada fahmaan.
Cabdinasir ayaa tilmaamay in Maanta tababarkan uu ku saabsan yahay wacyigalinta Duumada, ujeedada laga leeyahayna tahay ka hortaga Malaaryada.
Dr Cowke ayaa kula dar daarmay la tababarayaasha iyo Ha’yadahaa Caafimaadka ka shaqeeya inay dadka waxay u sheegayaan iyo fariinta ay gud binayaan is la haato, wuxuu xusay inay badan yihiin fariimo la siidaayo oo ku qoran af qalaad, taasna ay dhibaato ku tahay caafimaad layaasha jooga xarumaha aan la gaari karin, Wasiirka ayaa kula taliyey in Fariin walba oo caafimaad lagu qoro afka Soomaaliga, hadii kale ay noqonayso khasaare.